5 Izizathu Ukuze Ride oololiwe Night EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 5 Izizathu Ukuze Ride oololiwe Night EYurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 19/09/2020)
Nangona koololiwe yaseYurophu uleleyo ubusuku baba into yokuba izilwanyana ezisengozini (moya mali siya akujonge ngayo!), abathandi uloliwe Kusekho ngokungakhathali! Kuba abathandi kaloliwe nomdlandla, akukho beats tsiba lulahla oololiwe ebusuku kunye nokukhathalelwa ubuhle imigama emide ngaphandle kokuba ukwaphula ibhanki ukufumana ukuba babeya.
Ukuba ubuzifihla ukuba uceba ebusuku uloliwe uhambo aphesheya kodwa andiqondi ukuba oololiwe ebusuku ukhetho best, ukufunda i ngezantsi.
PHAWULA: Zonke zezizathu uzibekile kunye ukuwugqitha 'ukuba ukubala, akuyi chitha 10+ iiyure izinkcwe egxalabeni yakho entlokweni yakho jiggles nxamnye window kuloliwe ".
Oololiwe Night Ingaba Ixabiso-olusebenzayo
Kuba wonke umhambi kwi mali (okanye abo kengoku Ndikhetha ukuchitha ngakumbi isidlo ecikizekileyo indawo nje kwi itikiti bona), oololiwe ebusuku zezona eyona mali-friendly ukhetho opt (ingakumbi i uhambo eyandisiweyo). Ungalindela iindleko zakho kunqunyulwa kwisiqingatha xa indawo amathathu okanye amane nobusuku ehotele (omnye kuhlobo enganeno) kunye nenani elifanayo lobusuku kuloliwe, ukonga malunga $500! Ukuba akukho mali smart, thina asazi ukuba yintoni na!
Efficiency Ixesha koololiwe Night & Comfort
Ukusebenza yokuhamba kaloliwe ayinakuphikiswa! oololiwe aseYurophu fast, ziququzelelwe yaye yonk 'into oyibonayo kuba ukhetho yezothutho akukhathaliseki ukuba wena ukuya kwenye close like Italy okanye endaweni enye. Ukuhamba ngololiwe kungummangaliso kubo bonke abafuna ukuba ngowokuqala emgceni kwi-ofisi tour, zabo museum ozithandayo okanye naphi na ke ndingakhange baceba ukuya. oololiwe Night kukunika ukhetho ufumana aphumle ngexesha ebusuku. Emva koko sebenzisa emini ukunandipha sceneries gorgeous ngefestile, ngexesha uloliwe eyeka.
Reggio Calabria eMilan Uqeqesha
Kanye ezifana noololiwe rhoqo, oololiwe ebusuku ezingcono ukhetho wokuhambahamba iplanethi yethu. Ekubeni ukuvelisa CO2 kude ngaphantsi umkhweli ngamnye ngaphezu moya ukwenza, banokuba ukuthuthwa kwexesha elizayo. ke, ukuba wena akunguye abazi indalo, Uyazi yintoni ndlela uya kuba besuka ngoku ku.
Levanto eTurin Uqeqesha
La Spezia eTurin Uqeqesha
Naples eTurin Uqeqesha
ERoma eTurin Uqeqesha
Oololiwe Night zinkulu ukuze Ukwenza Friends
Ukuba ohamba yedwa, oololiwe Ubanika ithuba ukuhlangabezana abantu abaninzi emhlabeni eYurophu, ezahlukeneyo yonke enye kwenye. Fumana embalwa izinto ezifanayo ukuthetha ngayo, yaye sele ezinokuba wenza abahlobo ubomi! Plus, into ebaluleke nangakumbi eli xesha emhlabeni (ubuncinane okwelo isihloko sibe ku), sele umfumene ekhuselekileyo, abantu ezithembeke ukwabelana ikhabhathi zakho zokulala kunye! oololiwe Night iyamangalisa, kodwa embi uyakwazi ziphelela umnquba kunye neqela labantu hona, ziyanuka (uxolo!) okanye ... ukhohlela nje kakhulu. ke, ukufumana iqela leyo olukhulu yengxoxo kunye nobusuku ezimbalwa kwindawo enye emxinwa kungummangaliso!
I Ehle yeziBheno
Wowu, siphantse silibale ukufaka isibonelelo esikhuthazayo ngonaphakade soololiwe basebusuku ababizwa – bemvelo aphili! Musa ukulala nge amawa, Alps, kunye nezinye sceneries ngokufanayo amahle. Kodwa musa baziva benyanzelekile ukuba sihlale siphaphile njengoko kudlula ezidume industrial Jamani, mhlawumbi. Oh, kunye nokuthatha imifanekiso, nokuba yinto kuphela ngefestile!
Sazise ngokukhetha tweeting unathi @SaveATrain! , Ungafumana amanye amajelo ethu kwezentlalo emazantsi Gcina-A-Train kanye Yebo, ungakwazi ukuze kuthi amatikiti etreyini.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-reasons-night-trains%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#night #trainlovers oololiwe train Travel travelgermany travelitaly traveltips